छोराछोरीले लत्याएकी यी आमा, जो उठ्न बस्न सक्दिनन् जस्ले विगत ४ वर्षदेखि रुँदै यस्ता जाडोलाई कटाएकी छन्,‘भिडियोसहित’ – Post Patrika
सोमबार भोलि सार्वजनिक बिदा
मोडल अन्जली अधिकारीले मन परेको मान्छे नपाएपछि अर्कै संग बिहे गरिन ( भिडियो )
छोरा बनेर जन्मिएका मोहन र याम यसरी बने तेस्रोलिंगी, नागरीकताका लागी ४ वर्ष यसरी दुख भोग्नु पर्यो (भिडियो)
आइसक्रीमका बट्टामा भेटियो कोरोनाभाइरस
आफ्नो पाखुरीमा ओलीको तस्बिर अंकित ट्याटु खोपाउने यी युवा को हुन् ?
श्रीमान छाडेर श्रीमतीले अर्कैसँग कसिन् टाप, त्यसपछि यतिसम्म भयो !
मेष राशि हुनेले वृश्चिक, मीन र कर्कट राशिसँग विवाह किन गर्नु हुदैँन् ?
कलंकीबाट सुनको सिक्री चोरेर भाग्दै गरेका युवक पक्राउ
गिजाबाट रगत बग्नु यस्तो रोगको संकेत
मुख्य पृष्ठ /Video/छोराछोरीले लत्याएकी यी आमा, जो उठ्न बस्न सक्दिनन् जस्ले विगत ४ वर्षदेखि रुँदै यस्ता जाडोलाई कटाएकी छन्,‘भिडियोसहित’
छोराछोरीले लत्याएकी यी आमा, जो उठ्न बस्न सक्दिनन् जस्ले विगत ४ वर्षदेखि रुँदै यस्ता जाडोलाई कटाएकी छन्,‘भिडियोसहित’
काठमाण्डौ । ७१ वर्षीय मनीसरा भुजेल । जो जाडोले काठ्ठीएर रातभरी रुँदै विगत १० वर्षदेखि आफ्नै झुपडीमा बसिरहेकी थिईन् । उनको घर त थियो तर घर जस्तो घर थिएन । छानो त थियो तर त्यो छानो उनलाई चिसोमा न्यानो हुने र गर्मीमा शितल दिने ओत भएन । गरीबीको पनि पराकाष्ट उनको जीवनले वर्षौंदेखि घामपानी सहंदै आई रहेको थियो । र पनि उनी बाँचिरहिन् । कसैले सहयोग गरिदिऊन् भन्ने आश त लागेको थियो होला तर अरुसंग सहयोगको अपिल पनि गर्ने सक्ने अवस्थामा थिईनन् मनीसरा । थिईन् भने पनि राम्रोसंग बोल्न सक्दिनन् उनी ।
निकै नै बिजोग र दुःखद अवस्थाबाट आफ्ना जिन्दगीको बसन्तहरु पार गर्दै बाँचिरहेकी मनीसराको जीवनमा अहिले आएर थोरै भएपनि खुशीले उनको झुडीको आँगन टेकेको छ । घामको किरण छिर्ने उनको आँगनमा खुशीले पाईला टेकेको छ । विगत ४ वर्षदेखी नकाटिएको मनीसराको हातका औलाका नंगहरु यस पटक काटिएको छ । च्यातिएका उनको घरको छानोलाई यसै पटक फेरीएको छ । ओढ्ने ओच्ट्याउने लुगा उनको ज्यानले यसै पटक पाएको छ ।
हुन त मनीसरा एक्लै छैनिन् । उनीसंग उनका श्रीमान सोम बहादुर भुजेल पनि छन् । तर सोम बहादुरको पनि उमेर डाँडा पारीको घाम जस्तो भईसकेको छ । उनी काम गरेर खान सक्ने उमेरका छैनन् । तर पनि उनले आफ्नो श्रीमती मनसरालाई केही जोहो गरेरै भएपनि खुवाएकै छन् । मनीसराको छोराछोरी पनि छन् तर उनीहरुले आमा र बुवा दुवैलाई हेर्दैन्न् रे यस्तो मनीसरा भन्छिन् । उनको भनाई अनुसार हात खुट्टा लाग्ने भएदेखि नै छोराछोरीले छाडेका हुन् रे । भिडियोसहित
शिशिर भण्डारी चावाहिल चोकमा माछा बेच्न थाले
५० लाखको सम्पति लिएर श्रीमती अर्कै संग फरार ,रोजगारीका लागि खाडी गएका श्रीमानले रुदै गरे सबै संग यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित)
तिहारको मुखमा तिन घरका एक्ला छोराहरुको मृत्यु, शोकमा डुब्यो गाँउ [भिडियो]